Contract Turkey Dhuxul Engineer in Iibsasho Samee - RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaTurkey si ay u samee Engineer Iibso Contract Dhuxul
heshiis dhuxusha turkey noqon doonaa injineerada caalim
Soosaarka iyo elektiroonigga. Iyada oo la raacayo qaab-dhismeedka Xeerka Imtixaanaadka iyo Ballan-qaadista Injineerada Qandaraaslayda in laga shaqaaleeyo mashruucyada qodista farsamo ee Agaasinka Howlgallada Mashiinnada, 399 Injineero leh qandaraas qandaraas oo ku xusan Xeerka Sharciga Lam. 45 ayaa la iibsan doonaa. Qoondada iyo aqoonta shaqaalaha loo shaqaaleysiinayo iyada oo loo eegayo natiijooyinka Imtixaanka Qoraalka iyo Afka ayaa hoos lagu bixinayaa. Dhammaan ogeysiisyada iyo ogeysiisyada lagu sameyn doono codsadayaasha, marka laga reebo oggolaanshaha ballamaha, http://www.taskomuru.gov.tr waxaa laga samayn doonaa cinwaanka internetka, loomana diri doono ogeysiis qoraal ah. Codsadeyaasha aan buuxinin shuruudaha dalabka marxaladaha oo dhan waa la burin doonaa. Murashaxiinta u qalma in la magacaabo ayaa la magacaabi doonaa haddii Baaritaanka Amniga iyo Cilmi baarista ay wanaagsan yihiin.
Xaaladaha CODSIGA KA HELI KARO
Murashaxiinta doonaya in ay galaan Imtixaanka Galitaanka waxay lahaan doonaan shuruudaha soosocda illaa waqtiga kama dambeysta ah ee 13 / 12 / 2019:
1-Si loo fuliyo shuruudaha guud ee lagu sheegay qodobka 399 ee Sharciga Xeerarka 7,
2- Qalin jabinta waaxaha Macdanta, Mashiinka iyo Korontada Koronto ee kulliyadaha ama machadyada tacliinta sare oo loo idmaday waxaa ansixiyay Golaha Tacliinta Sare illaa waqtiga kama dambeysta ah,
3- Uguyaraan 2018 (Todobaatan) dhibco KPSSP3 nooc ah natiijada natiijada 70 Imtixaanka Xulashada Shacbiga ee Dadweynaha,
Shuruudo ayaa la raadinayaa.
DATE, MEESHA IYO FOOMKA CODSIGA
1- Codsiyada imtixaanka ayaa bilaabmi doona maalinta ku xigta daabacaadda shaacinta imtixaanka ee Gazette Rasmiga ah waxayna ku dhamaan doontaa dhamaadka 13.12.2019 taariikhda (17.00).
2- Waxa lasiiyay in murashaxiinta raba inay galaan imtixaanka gelitaanka ay buuxiyaan shuruudaha kor lagu soo sheegay; "Way adag tahay Dhuxul Enterprises General Turkey Agaasinka xaafadda Oogada beero canab Street illayn dubatay Sokak No: 2 Zonguldak / TURKEY" ama ka our General Directorate ka cinwaanka internetka (http: //www.taskomuru.gov.t waa) ay bixin doonaan "Foomka Codsiga" dhamaystiran oo sax ah buuxi foomka.
3- Daabacaadda Foomka Codsiga ee uu saxeexay codsadaha iyo dukumiintiyada kale ee looga baahan yahay dalabka waa in lagu soo gudbiyaa cinwaanka kor ku xusan shakhsi ahaan ama boostada illaa dhammaadka saacadaha shaqada ee 13.12.2019 (17.00).
4- Codsiyada aan loo gudbin Agaasimaha Guud muddada gudaheeda dib-u-dhac ku yimaadda boostada ama sababaha kale iyo kuwa aan buuxin shuruudaha lagu sheegay ogeysiiska lama hawl-geli doono.
5- Dukumiintiyada waa in loo gudbiyaa Agaasimaha Guud ee Xeerka Ganacsiga ee Turkiga illaa waqtiga loo cayimay. Dukumiintiyadaan waxaa oggolaan kara Waaxda Shaqaalaha ee Agaasinka Guud, iyadoo la siinayo dukumiintiyada asalka ah.